भगवानको लागि एक कचौरा रगत खोज्न भौतारिरहे नारद
२०७६ चैत ४ मंगलबार, काठमाडौं । एक समय महर्षि नारद वैकुण्ठ गइरहेका थिए, बाटोमा एक महिलासँग भेट भयो। ती महिलाले भनिन्, मुनिवर ! भगवानलाई यो सोधिदिनु होला कि मेरो घरमा सन्तान कहिले हुनेछ? नारदजीले भने, ठीक छ, सोध्ने छु । वैकुण्ठमा पुगेर नारदजीले भगवानलाई त्यो महिलाको सन्तानको बारेमा सोधे। भगवान नारायणले भन्नुभयो, त्यो महिलाको भाग्यमा सन्तान सुख छैन । ... बाँकी अंश»
सिस्नोको स्वाद : माछा मार्न जाने भन्दै खोला गएर सिस्नो टिपेर ल्याउँथे
२०७६ चैत ४ मंगलबार, काठमाडौं। सिस्नो भन्नेवित्तिकै पहिले–पहिले दूरदराजका भोक टार्ने ‘खुराक’भन्ने गरिन्थ्यो। अझ कर्णालीमा भोकमरी हुँदा सिस्नोले छाक टारेका खबर सुनिन्थे। तर, अहिले सिस्नो विपन्न परिवारको छाक टार्ने खुराकमा सिमित रहेन। प्रशोधित सिस्नो अहिले देशका तारे होटेलमा मात्रै होइन विदेशसम्म पुग्न थालेको छ। ... बाँकी अंश»
एउटा 'मेड इन-चीन' महामारी
२०७६ चैत ४ मंगलबार, नयाँ दिल्ली। चीनबाट शुरु भइ डेढ सय भन्दा बढी मुलुकमा फैलिएको कोभिड–१९ कोरोना भाईरस जसले सामाजिक अवरोध, आर्थिक क्षति, बिरामी र मृत्यु ल्याएको छ। चीनका अधिकारीहरूले उक्त भाईरस देखा परे पछि पनि शुरुका दिनमा यसबारे सवै जानकारीहरु साझा नगर्दा समग्र विश्व अहिले पिडित भएको छ। ... बाँकी अंश»
कृष्णको नाममा उद्धव आफैले लेखे चिठ्ठी, पत्याइनन् राधाले
२०७६ चैत ३ सोमबार, काठमाडौं । भगवान श्रीकृष्णको अनेक बाल लीलाहरू छन। भगवानले जब उद्धवलाई भेट्नुभयो, उद्धव ठूलो ज्ञानी थिए, धर्मशास्त्रहरू धेरै पढेको थिए । उनलाई भौतिक ज्ञान थियो, तर उनको मनमा साँचो भक्ति थिएन अनि भक्ति बिना उसको ज्ञान एकदमै रूखो थियो । भगवान कृष्णले उनलाई भन्नुभयो,'मैले आफ्नी आमालाई, पिताज्युलाई अनि गोपिनीहरूलाई फर्केर आउछु भनेको थिएँ, तर कामको व्यस्तताको कारण फर्कन सकिरहेको छुईन। उद्धवज्यु! तपाई गोपिनीहरूकोमा जानुहोस् अनि उनीहरु सबैलाई केहि ज्ञान-ध्यानको कुराहरू सम्झाएर आउनुहोस।' ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री ज्यू ! कृपा होस, पुनर्जीवनको बाँकी समय विगत जस्तो नहोस !
२०७६ चैत ३ सोमबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ! दोस्रो पटक मिर्गौला फेरेर अर्को पुनर्जीवन पाउनु भएको सन्दर्भमा यो पत्र लेख्ने काम भएको छ । कुनै भूमिका बिनानै भनिहालौं – तपाइको यो पुनर्जीवनले विगतमा आम नागरिकले अपेक्षा गरेका भन्दा भिन्न, बोली एकातिर र काम अर्का तिर हुने गरी काम नहोस । भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने भन्दै तर यता तिनलाई आफनो घरमा बास दिइनै रहने काम भयो । आफनालाई जेजसरी पनि जोगाउने र अर्कालाई जेजसरी पनि फसाउने मनसाय राखेको बुझे आम तहले र सरकारी निकाय त्यस्तै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेगरेका अवस्था प्रकट भैरह्योे । नागरिकले आफना हकहित खोसिएको महशुस गर्न वाध्य भए, सूचना प्रविधि देखिका दर्जन जति विधेयकमा प्रस्ताव भएका ठूला दण्डका व्यवस्था त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ । ऐन शंसोधन भए तर त्यो राष्ट्रको भन्दा कुनै निश्चित व्यवसायसीको हितमा रह्यो । यसैकै परिणाम हुनुपर्छ सरकारका प्रवक्तानै राष्ट्रले खरिद गर्ने कुनै वस्तुको अर्वका अर्व मूल्य बढाएर त्यो रकम आफुले पाउनु पर्ने भनी प्रस्तावक नै भए । यी र यस्तै काम कुराले दुइवर्षको शासनकाल नै अत्यास लाग्दो भयो सर्वसाधारणका लागि । त्यसले पनि अव यो पुनर्जीवनको कार्यकालमा कहिल्यै त्यस्तो नहोस भन्ने हार्दिक कामनाका साथ त्यस्ता केही नमुना टिपोट प्रस्तुत भएको छ । ... बाँकी अंश»
नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा तर कसरी ?
२०७६ चैत ३ सोमबार, कोरोना भाइरसलाई चिसो तापक्रम मनपर्छ जुन तापक्रम काठमाडौं आसपासमा छ। यसो भन्नुको मतलव तराई तथा गर्मी ठाँउमा संक्रमण गर्दैन भनेर बुझ्न मिल्दैन। थाइल्याण्ड लगायतका मध्य पूर्व एसियाका देशहरुमा पनि यो भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। ... बाँकी अंश»
कोरोनाले जगाएको सार्कराष्ट्रबीचको एकता र साझेदारी
२०७६ चैत ३ सोमबार, काठमाडौं। विश्वका १५० भन्दाबढी देश प्राणघातक ‘कोभिड–१९’ बाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेका बेला दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का आठ सदस्य राष्ट्रका उच्च नेतृत्वबीच यो संक्रमणविरुद्ध साझा रणनीतिका साथ डटेर लड्न आज भिडियो कन्फ्रेन्स भएको छ। ... बाँकी अंश»
मानव जीवनको परम लक्ष्य जीवन मुक्ति
२०७६ चैत २ आइतबार, काठमाडौं। अध्यात्म उपनिषदमा ऋषि भन्छन्-अहंकारबाट मुक्त भएको मनुष्यले नै आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। अहंकार एकदमै सूक्ष्म छ। मनुष्यलाई थाहै लाग्दैन कि ऊ कहिले त्यसको फन्दामा पर्यो। अहंकार अत्यन्त सूक्ष्म छ, यसकारण त्यसलाई पक्रनको निम्ति सूक्ष्म यन्त्रको जरुरत पर्छ । त्यो सूक्ष्म यन्त्र हो-आत्म-तत्त्व । ... बाँकी अंश»
२०७६ चैत १ शनिबार, काठमाडौं। अध्यात्म उपनिषदमा ऋषि भन्छन्-अहंकारबाट मुक्त भएको मनुष्यले नै आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। अहंकार एकदमै सूक्ष्म छ। मनुष्यलाई थाहै लाग्दैन कि ऊ कहिले त्यसको फन्दामा पर्यो। अहंकार अत्यन्त सूक्ष्म छ, यसकारण त्यसलाई पक्रनको निम्ति सूक्ष्म यन्त्रको जरुरत पर्छ। त्यो सूक्ष्म यन्त्र हो-आत्म-तत्त्व। ... बाँकी अंश»
पितृ तार्न जहाँ रुखमा झुण्ड्याइन्छ लुगा
२०७६ चैत १ शनिबार, काठमाडौं। सँधै भीडभाड भइरहने ठाउँ। बत्तिबाल्ने मात्रै होइन, फोटो खिच्नेको पनि उस्तै लाइन । काठमाडौंबाट पूर्व, ४३ किलो मिटर गएपछि चैते आउँछ, चैते गुम्बा । त्योदेखि माथि सिढीँ चडेर २० मिनेट उकालो लागेपछि आउँछ, नमोबुद्धको खास गुम्बा। ... बाँकी अंश»
देशको शासन कसले चलाइरहेको छ ?
२०७६ फाल्गुण ३० शुक्रबार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि गरिएको शल्यकृयाको नवौं दिनमात्रै उनकी पत्नीले भेटिन् । २१ फागुनमा उनको शल्यकृया भएको थियो भने यो भेट २९ फागुनमा भएको हो । घरको परिवार र त्यसमा पनि पत्नीले समेत भेट्न नपाएको अवस्थाले नै बुझाउँछ यतिका दिनसम्म प्रधानमन्त्री आफनो स्वास्थ्य र त्यससँग सम्वन्धित विषयमा बाहेक राज्यका कुनैपनि औपचारिक अनौपचारिक कुरामा पुराका पुरै बेखवर नै रहे । उनका मन्त्रीहरुले समेत भेट्न पाएनन् । यसले बुझाउने कुरा हो राजकीय कामका बारे यी दिनमा उनको वा भनौ देशको कार्यकारीणीको कतै सम्वन्ध नै भएन र सम्पर्कनै जोडिएन । ... बाँकी अंश»
अर्जुनका ७ गुणलाई अपनाउने व्यक्ति बन्नसक्छन् राम्रो नेता
२०७६ फाल्गुण २९ बिहिबार, महाभारतको पूरा कथामा धेरै कहानी यस्ता छन्, जसले अर्जुनको बल र बुद्धी दुवैलाई बुझाउँछ । अर्जुनमा शारीरिक बलका साथै मानसिक शक्ति पनि थियो । जसको कारण उनी चतुर नीतिको माध्यमबाट दुश्मनमाथि पनि जीत्हासिल गर्थे । यसै किसिमले हामीहरुले बुद्धी अनि योजना बनाएर काम गर्नु जरुरी छ । यसबाट निश्चितरुपमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । ... बाँकी अंश»
मृत राजासँगै आगोमा जलाउदा भाग्छन भनेर रानीलाई साङ्गलोले बाधिन्थ्यो
२०७६ फाल्गुण २९ बिहिबार, आजभन्दा २ सय वर्ष अघि सतीप्रथा जस्तो अन्धविश्वासी कुरितीले ठाउँ लिएको थियो । विशेषगरी यो प्रथा राजपरिवार र कतै ब्राह्मण समुदायमा रहेछ । राजाहरुको पत्नी धेरै हुन्थे । रोलक्रममा आफ्ना सन्तानलाई अघि पार्ने हेतुले कतीपय रानीलाई सती पठाएर उनका सन्तानलाई रोलमा पछि बनाउथे । अनि आफ्ना सन्तानलाई अधिकार सम्पन्न गराउने दाउमा हुन्थे । कहिलेकाहि त धेरै रानीलाई पनि सती जान बाध्य पारिन्थ्यो रे ! सतीलाई लोग्नेको लासका साथ सुताएपछि आगोले पोल्दा उठेर भाग्छन कि भनेर साङ्गलोले बाधेर आगो लगाउथेरे भन्ने पनि सुनिन्छ । मानिसलाई जिउदै पोल्ने कस्तो क्रुरता हो यो ? सँगसँगै लोग्नेसँग जलेर मर्न पाए स्वर्गमा सँगै बस्न पाइन्छ भन्ने अन्धविश्वास फैलाउने पनि उत्तिकै दोषि ठहरिन्छन् यो विषयमा । मानवतालाई मध्य नजर राख्दै चन्द्र शंशेरले सान् १९२०मा सतिप्रथा बन्द गराएका हुन् । ... बाँकी अंश»
आध्यात्मिक प्रगतिका लागि कसको नाम जप गर्ने ?
२०७६ फाल्गुण २८ बुधबार, काठमाडौं । वर्तमान कालमा आध्यात्मिक प्रगति गर्नका लागि आफ्नो जन्मानुसार धर्मको भगवान र देवताको नामजप गर्ने सबैभन्दा प्रभावी माध्यम हो । हामी त्यो धर्ममा जन्म लिन्छौं, जुन हाम्रो साधना आरम्भ गर्नको लागि सर्वथा उपयुक्त हुन्छ । ... बाँकी अंश»
उपचार व्यवस्था गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिनु स्वास्थमन्त्री ढकाल ज्यू
२०७६ फाल्गुण २८ बुधबार, मन्त्री ढकालको अभिव्यक्ति दुई तरिकाबाट बाहिर आएका छन ।एउटा विदेशमा फसेकालाई चीनबाट उद्दार गरेको जस्तो गर्न सकिन्न अर्को ,कोरोनो लागेपछि मात्रै सरकारले जिम्मा लिन्छ क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैन ? यदि साँचो हो भने यी दुई कुरा सरकारको मन्त्रीले भन्ने नहुने अति कमजोर कुरा हुन ।सार्वभौमसत्ताको व्यवस्थामा प्रत्येक नेपाली नागरिकले राज्य बाट एकरत्ति भए पनि आशा गर्छ ।नागरिकको आशालाई निराशा बनाउने र राज्यको शक्ति कमजोर छ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिको सबै तिर आलोचना हुनु स्वभाविक पनि हो । कोरोनोबाट संक्रमित भएर धेरै नागरिकले राज्यलाई भारि बोकाए जस्तो गरि मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिसँग मेल खाने अवस्था पनि नेपालमा सृजना भएको छैन । तर उनको अभिव्यक्तिले नेपाली नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढाएको छ । कतिपय संक्रमित देशहरुमा नेपाली नागरिकहरु उद्दारको पर्खाइमा होलान ।आफ्नो देश र राज्य प्रति विश्वास र भरोषा छ होला । तर यता देशका स्वास्थ्यमन्त्रीको यस्तो भनाइले उनिहरुको मन कस्तो भएको होला? राज्यको सबै शक्ति सकिएर अन्तिम र भयावह अवस्थामा मात्रै दिनुपर्ने अभिव्यक्ति मन्त्री भट्टराईले आत्तिएर भने या नियतबस भने त्यो थाहा छैन । ... बाँकी अंश»
भगवान् रामलाई लोखर्केको साथ
२०७६ फाल्गुण २७ मंगलबार, काठमाडौं । त्रेता युगमा भगवान् बिष्णु श्रीरामचन्द्रको अवतारमा आउनुभयो । सो समय धर्मपत्नी देवी सीता जो माता लक्ष्मीको अवतार हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अपहरण लंकापति रावणले गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
‘मेरो शरीर मेरो रोजाइ’
२०७६ फाल्गुण २७ मंगलबार, पाकिस्तानमा महिलामाथि निकै दमन हुने गर्दछ । र पनि उनीहरुले त्यहाँ मार्चपास गरेका छन् । पाकिस्तानका लाहोरसंगै थुप्रै अरु सहरमा उनीहरुले मार्चपास गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
रोकिएन मापसेमा सवारी चलाउने क्रम
२०७६ फाल्गुण २७ मंगलबार, ‘कहिलेकाहिं त खानै पर्यो नि अर्को दिन गएर एक घण्टा क्लास लिने त हो नि रिफ्रेस भइन्छ ।’ के त्यो रिफ्रेस हुने ठाउँ हो ? ... बाँकी अंश»
चाणक्यका अनुसार राम्रो लिडर र सफल व्यक्ति बन्न चाहिन्छ यी ४ गुण
२०७६ फाल्गुण २६ सोमबार, काठमाडौं । चाणक्य नीतिको ११ औँ अध्यायको पहिलो श्लोकमा ४ गुणको बारे बताइएको छ । जुन गुण सफल व्यक्ति वा असल लीडरमा हुन्छ । सो गुण सिकेर भन्दा पनि मानिसहरुमा जन्मजात रहन्छ । जसको प्रभावबाट हरेक काममा सफलता मिल्छ । आजको समयमा जागरीर, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रमा यी गुणको कारण सफलता मिल्छ । ... बाँकी अंश»
फागु पूर्णीमाको नालिबेली : नेवार समुदायको प्रेम दिवसदेखि थकालीको तिरसम्म
२०७६ फाल्गुण २६ सोमबार, नेवार समुदायमा भने यो पर्वलाई प्रेम दिवसका रुपमा मनाउँछन । यस दिन युवा युवतीहरुले एकअर्कालाई मन पराएको स्वीकार्ने दिनका रुपमा मनाउँछन् । सात दिनसम्म चल्ने यो पर्वमा प्रत्येक दिन आफना दाजुभाइ तथा नातेदार भेला भई मीठामीठा खानेकुरा पकाएर खाई रमाइलो गरिन्छ । भक्तपुरमा भने, व्यापारका देवताका रुपमा भिमसेनलाई पुज्दै भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर अगाडिको प्रसिद्ध भिमसेन मन्दिरको पाटीमा बसेर नेवारहरु नेवारी भाषाको गीत गुञ्जाउँदै पर्व मनाउँछन्। ... बाँकी अंश»